Ikamelo elinendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela kanye Nendawo Yemidlalo Yeshashalazi - I-Airbnb
Ikamelo elinendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela kanye Nendawo Yemidlalo Yeshashalazi
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Heidi
Siyakwamukela! Sikholelwa ukuthi uzoyithokozela le suite yangasese yezivakashi, ene-master suite enhle, igumbi lomndeni elinetiyetha yamamuvi nendawo yokudlela. Le suite itholakala enkabeni yedolobha ukuze kube lula ukuhamba ukuya e-Jackson, e-Yellowstone, e-Grand Targhee, e-Bear World, e-Craters of the Moon, nase-Sand Dunes. Singatholakala eduze kwase-HWY 20 futhi hhayi kude ne-HWY 33. Sikumizuzu emi-4 nje ukusuka e-Rexburg, e-Idaho ne-BYU-Idaho, Walmart, kanye nezindawo zokudlela eziningi. Siyazi ukuthi uzoba nokuhlala okukhumbulekayo.
Ubuhle obunobungani bomndeni. Le suite inikeza okuningi okwengeziwe! I-Wi-Fi, igaraji elinamathiselwe imoto engu-1 elinokufakwa kwekhiphedi, Indawo yokupaka eyengeziwe, Iprojektha ye-movie ozoyixhuma ku-iphone noma ikhompyutha ephathekayo, Iwasha nokomisa, Ifriji encane, i-microwave, umshini we-Keurig wekhofi noma ushokoledi oshisayo (hhayi ikhishi eligcwele), Indawo yokudlela, Ikhabethe lemidlalo elinokukhethwa okubanzi kwamakhadi nemidlalo yebhodi ongakhetha kuyo, Indawo yokusebenza yasehhovisi, Umtapo wolwazi wokwabelana (thatha incwadi, shiya incwadi). (I-Playpen nesihlalo esiphezulu siyatholakala uma uceliwe).
4.87 · 142 okushiwo abanye
Le ndawo eyingqayizivele iyibhulokhi elingu-1 ukusuka ethrekhi yokuhamba/egijimayo ibheke kwelinye, kanye nebhulokhi elingu-1 ukusuka epaki lomakhelwane kwelinye icala. Iyindawo yomndeni kodwa eseduze nezindawo nezindawo zokudlela ezidumile.
Sihlala emagcekeni ngakho sizotholakala futhi sijabule ukukusiza noma kunjalo. Kodwa-ke, uzoba ne-suite kuwe, kufaka phakathi indawo yakho yokungena yangasese.